KIDULTHOOD: WAA MAXAY ARRIMAHA GAARKA AH EE DADKA DHALINYARADA - Bulshada Cadaadiska
KIDULTHOOD: WAA MAXAY WAXYAALAHA WAALIDIINTA DHALINYARADA DHALINYARADA
Inta badan warbaahinta ingiriiska ah, waxaa la joogaa waqtigii lagu soo afjari lahaa khuraafaadka ku saabsan 'dhalinyarada khatarta' si loo ogaado waxa run ahaantii muhiim u ah iyaga iyo waxa ay sameynayaan natiijada. Ku biir koox ka mid ah qalinjebiyayaasha 12 ee barnaamijka awood qeybinta dhalinyarada ee UK, Adeegga Muwaadiniinta Qaranka (NCS) ee wada hadalka. Maqalkooda fikradaha ku saabsan mowduucyada kala duwan ee aqoonsiga, bulshada, riyooyinka iyo rajada, warbaahinta, saameynta, xoriyada iyo kacdoonka.
Elementer volunteer Cheyenne ayaa lagu martiqaaday inay taageerto NCST shir-hawleedka dhalinyarada ee Khamiista, Maarso 22, 2018. Cheyenne wuxuu u muuqday mid ka mid ah daraasaddaha kiisaska Warbixinta Dhallinyarada ee NCS ee lagu soo bandhigay Shirweynihii Diseembar. Cheyenne wuxuu ku fadhiisan doonaa guddi leh dhowr waxyaalood oo kale NCS Grad iyo Maareeyaha Kulliyadda James Canvin toddobaadka soo socda ee London.